Homeụgbọ okporo ígwèKENSİÇİ Rail Systemshavaray
Oziọma Havaray ka Izmir
N'ime afọ mbụ nke President Aziz Kocaoglu nke Izmir Gaziemir ESBAS suburban ebe na 2016 na Gaziemir ọhụrụ Fairground (Trade Izmir) n'etiti zubere monorail, ọ bịara pụta ìhè ọzọ ọhụrụ president wee Soyer. Mayor nke Izmir Metropolitan Municipality [More ...]
A ga-eme 10 New Metro Line na Istanbul
A ga-ewu 10 New Metro Line na Istanbul Kedu ndị mpaghara ga-enwete kpakpando na ụlọ: Nke kacha mkpa 10 metro line, nke na-eru nso na ọrụ ya na Istanbul, ga-eme ka ụlọ ahụ dịkwuo mma site na ịmegharị ọtụtụ ebe site na Bakırköy ka Çekmeköy, Kağıthane ruo Zeytinburnu. Emlakjet [More ...]
Site na Prọfesọ na-ahụ maka ezumike nká gaa na Havaray System na Sarıçay
Si na Ngalaba Geology Department nke Çanakkale Onsekiz Mart University (ÇOMU) ngalaba nke Engineering. Dr. Doğan Perinçek, dọtara uche na ọrụ ọ chọrọ maka obodo na mgbasa ozi mgbasa ozi. O meere aha ya onwe ya site n'inye echiche ya na mgbasa ozi mgbasaozi. Dr. Doğan Perinçek, [More ...]
A ga-edozi Pulse nke Ugbo Ala Ugbo na Izmir
Eurasia Rail International Railway, Light Light Rail, Ihe Njirimara na Ndekorita Ngwaọrụ 10-12 April 2019 na-akwadebe iji kwado aha nke ụwa ụgbọ okporo ígwè na Izmir. Otu n'ime obodo ndị kasị ukwuu Eurasian na otu n'ime ihe ndị kasị ukwuu 3 ụgbọ okporo ígwè dị n'ụwa Av [More ...]
Judiciary, Ankara Courthouse Turned Transportation Transfer Center kwuru ịkwụsị
11 Ankara Nlekọta Court, Chamber of Architects Ankara Branch ya ikpe megide Ankara kootuhausu ka bibie ụgbọ njem nyefe center, nyere na-egbu iji. Mkpebi mkpebi nke Ankara nke ụlọ ndị na-emepụta ihe, nkwụnye ụgwọ nke mgbanwe na atụmatụ ahụ nke na-egbochi ohere nke ụlọikpe [More ...]
CHP Green Asked Havaray bụ International Metrobus Carridge Cartridge Scratcher
Havaray na-egosi na a okporo ígwè nhọrọ eri ihe na-erughị Metro CHP Ankara osote onye Nihat Green, ọha iga edoghi na akpan akpan nwere ike mfe ike na Metro na Ankara banyere monorail iga ụdịdị na ntinye ikwe ọnụ na Turkey [More ...]
A ga-ekesa Asftarism na Ankara na Ankara
Ankara Metropolitan Municipality, bụ isi obodo nke Metro na Ankaray ụgbọ n'oge ọnwa nke Ramadan ka ọbịa si ná mpụga obodo "a Celsius ftaree ntụrụndụ" bulunacak.ankar Metropolitan Municipality, Başkentliler na n'oge Ramadan ka ọbịa si ná mpụga obodo na ụzọ ụgbọ oloko na Ankaray ụgbọ "a Celsius ftaree [More ...]
Green na CHP: Ụzọ isi ụgbọ okporo ígwè nke Ankara ga-ejikọta ya na ọ bụghị nhata
E nwere ihe dị iche n'etiti njem ụgbọ njem ır na "njem". Isi Anhat Nihat Yeşil; Enweghị nkọwa ma ọ bụ echiche dị na "Ụgbọ njem Ụgbọ njem İm. Ozi nke njem nwere ikike na Master Plans nke obodo anyị; Atụmatụ obodo na obodo ukwu [More ...]
A kagbuo Sefaköy-Başakşehir Havaray System, kama ụzọ ụgbọ ala na-abịa
Mayor nke Istanbul Metropolitan Municipality Mevlüt Uysal na-arụ ọrụ na Küçükçekmece. President Uysal nwekwara zubere gara aga Sefaköy [More ...]
President İBB President Mevlüt Uysal na-ekwuputa Mwepu nke Ụlọ Ọrụ Ahụhụ
Istanbul Metropolitan Municipality Mayor Mevlüt Uysal Küçükçekmece, nke ga-eji isii otapark-aga n'ihu na-ewu 15 nyere ozi na pịa bulunarak puku square mita, ogige nke kwuru na ụlọ. President Uysal nwekwara atụmatụ na mbụ Sefaköy - Başakşehir [More ...]
Akwụsịla oru ngo Topbas Havaray
E mebiri ọrụ Sefaköy-Başakşehir Havaray. A ga-emepụta ụzọ ụgbọ ala na ụzọ ụgbọ okporo ígwè. Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) President Mevlut Uysal, mgbe a kpaliri site na arụkwaghịm nke President Tayyip Erdogan, bụ ndị hapụrụ ihe post Kadir Topbas Sefaköy-Başakşehir havaray System [More ...]
Ụgbọ njem na Istanbul na-aga n'ihu n'enweghị nsogbu
Ulo oru ugbo ahia, nke ga-eme ka njem nke okporo ụzọ na-eme ka ume na ikuku ume na Istanbul, na-aga n'iru n'ogo. A na-ezube iji dozie nsogbu okporo ụzọ nke a na-achọtabeghị kemgbe ọtụtụ afọ na ntinye ego njem na Mega City Istanbul. a [More ...]
Site na Havasli na Metro
Ụlọ ahịa azụmahịa na ọrụ Vadistanbul meghere ọnụ ụzọ ya nye ndị ọbịa. Na ala nke Evyap Holding, Ụlọ Ahịa 103 dị na 270 puku mita square mita na nkwado nke Artaş İnşaat na Invest İnşaat. N'ebe ahụ mechiri emechi nakwa dị ka ọrụ ahụ [More ...]
Ebe ọhụụ ọhụrụ nke ndị fan: VADİSTANBUL
Galatasaray Fans now vadistanbul ụlọ ahịa na etiti nke Istanbul ọhụrụ ọkacha mmasị venues na Turk Telekom Stadium tupu egwuregwu nwere ike izute na VADİSTANBUL AVM. Cendere na Turk Telekom Stadium, Hasdal, Kemerburgaz mmeghe ụzọ na okporo ụzọ na TEM La 47, 41 Y [More ...]
Havaray 'si na Ndagwurugwu
The Cityscape Global 2017, weere otu n'ime ụlọ ndị kasị mkpa na ụlọ nzukọ na ụwa, meghere ọnụ ụzọ ya na Dubai. The Cityscape Global 2017, weere otu n'ime ụlọ ndị kasị mkpa na ụlọ nzukọ na ụwa, meghere ọnụ ụzọ ya na Dubai. N'afọ a 15 [More ...]
Ebe ọ bụ na ọrụ Havaray dabara na ọrụ abụọ dị iche iche, a ga-emegharị ya ma gbanwee ya. A kwụsịrị obiọma maka oge mbụ na Istanbul na mgbanwe nke ụzọ na ụgwọ. Ọrụ abụọ dị iche iche ejirila ọrụ ngo ahụ rụọ ọrụ. [More ...]
Sefaköy-Halkalı- Kagbuo obi na Başakşehir Havaray
Alarko Holding's Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Line Construction, Electro-Mechanical, Ọrụ Ọma na ụgbọala Obi ebere dị na nkwupụta banyere obi ebere kagbuo. Alarko 1 nwere akara kachasị elu maka obi ebere na ijeri 292 nde TL. Alarko [More ...]
Afọ 2019 na Istanbul iji gosi usoro usoro ígwè
Na 2019, Havaray na Dekovil sụgharịrị uche na ọrụ ụgbọ okporo ígwè ndị a ga-etinye na Istanbul. Ọ bụ ezie na Istanbul Metropolitan Municipality njem investments na-aga n'ihu na-enweghị ihe ọ bụla na-efu, ọ na-ezu iji jikọọ na mpaghara nile na okporo ígwè ígwè ọrụ na-emepụta ego. BỤ nke a [More ...]
Candan: Monorail System Do not Solve Transportation Nsogbu na Ankara
Chamber of Architects Ankara Alaka kwuru na usoro monorail agaghị edozi nsogbu njem nke Ankara na ọ ga-eweta nnukwu ego. Obodo ukwu dị na Ankara nke na-adịbeghị anya nakweere usoro monorail maka mfe ịnweta ụlọ ọgwụ obodo na Etlik na Bilkent. [More ...]
Ụlọ ọrụ 4 bụ onye nkwarụ na mbụ Ivabul na-agba ume
Istanbul nwere 4 ụlọ ọrụ nwere nkwarụ mbụ havaray obi: Istanbul mgbe mbụ havaray jụrụ mere ka obi na kasị ala 2 enye Alsim Alarko na Dogus İnşaat'l nọrọ ngụkọta 4 ụlọ ọrụ nwere nkwarụ na Istanbul Metropolitan [More ...]
Usoro New Metro na Havaray Na-abata Maltepe
Usoro New Metro na Havaray Na-abata na Maltepe: Kadir Topbaş, Mayor nke obodo Istanbul metropolitan, zutere ụmụ amaala na nnọkọ oriri na ọṅụṅụ na Maltepe. President Kadir Topbaş, na-agwa Maltepel okwu, bụ onye jupụtara ụda Turkika n'aka ya, nọ na 13 [More ...]
Vidio Istanbul Havaray Line Vehicles were Downloaded on Rail (Report Special)
Istanbul havaray Valley Okporo ígwè Line na Tools Na: ndagwurugwu emepụta Switzerland na Istanbul n'okpuru Turkey mbụ onwe havaray zubere oru ngo, oru ngo-a belatara abụọ monorail okporo ígwè ụgbọala. Artaş -İnvest Adi Partnership na Cendere na Sarıyer [More ...]
Turkey mbụ Havara of
Turkey mbụ Havara: Istanbul Metropolitan Municipality Mayor Kadir Topbas Metro n'ebe ọ bụla N'ebe nile Havara onodu nke Turkey mbụ ụgbọ oloko oru ngo-amalite Istanbul. A na-eji obi ụtọ maka Havaray wuru n'etiti Küçükçekmece Sefaköy na Başakşehir. Eruwo usoro nkwekọrịta. Construction [More ...]
Sefaköy-Halkalı- Alarko nwetara obi maka Başakşehir Havaray Line
Sefaköy-Halkalı- Alarko nwetara obi ebere maka Başakşehir Havaray Line: Alsim Alarko Industrial Plants na Trade Inc., otu n'ime ndị enyemaka nke Alarko Holding, Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Line obi nwere ọdịda nke kasị dị ụtọ obi ma merie obi. Ọnụahịa dị nro nke obi dị na mbụ na-ewepụ VAT [More ...]
Sefaköy-Halkalı Havaray Company Obi Ụtọ
Sefaköy-Halkalı Ụlọ ọrụ ahụ na-enweta Obi Ụtọ nke Havaray: Kadir Topbas nyere ozi ọma ahụ na ndị obodo Istanbul ga-emeghe na 2019 site Havaray. Obodo ukwu nke Istanbul Mayor Kadir Topbaş kwuru okwu na mmalite nke Büyükçekmece district SKY isi oche [More ...]
Eurasia Rail na-eme ka ọnụ ụzọ 2017 bịa na ndị ọbịa
Eurasia Rail na-eme ka 2017 mara ndị ọbịa ya: 7. Ụgbọ okporo ígwè International, okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè, ogwe ihe ndị e ji arụ ọrụ na ebe ndị e ji arụ ọrụ e ji mara okporo ígwè na Effsia 2017 Fair 02 Mart 2017 mepere emepe ngosi nke Istanbul. Na-emeghe ka Istanbul Expo Center; Ụgbọ njem, Mbupu na [More ...]
2017 Eurasia Rail, 70 10 Mba Na-akwadebe izute Ọtụtụ puku ndị bịara
Eurasia Okporo ígwè 2017, 70 10 Country-akwadebe maka Ọtụtụ puku Ọbịa ka Ikwusa: Eurasia Okporo ígwè 2017, 70 10 puku ndị ọbịa si mba na-na-njikere-ekere òkè! Eurasia Okporo ígwè nke ga-ẹkenịmde ke Istanbul Expo Center na March 2 4 2017- ụbọchị; 30 300 si na mba [More ...]
Eurasia Rail, Nke mbụ na naanị okporo ụzọ okporo ụzọ nke Eurasia Region
Eurasia Okporo ígwè Eurasia Region Railways nke Mbụ na naanị Fair: Eurasia, ịbụ naanị ngosi na mpaghara na Eurasia Okporo ígwè bụkwa ụwa 3. Ọ na-edi ihe ùgwù nke ịbụ onye kasị ukwuu okporo ígwè ngosi. Na 2017 7. Eurasia ga-eme otu ugboro [More ...]
Mpaghara ugbo ala na ezute na ugbo Eurasia na Istanbul
Railway Sector n'Ụzọ Kwekọrọ na Istanbul na Eurasia Okporo ígwè: International Okporo ígwè, Light Okporo ígwè, Infrastructure na lọjistik ngosi - Eurasia Okporo ígwè Fair 30 300 ụdị na ụlọ ọrụ si mba ịga. Istanbul International Okporo ígwè, Light Okporo ígwè, Infrastructure na lọjistik [More ...]
Sefaköy Halkalı Başakşehir Havaray Line e nyere: Sefaköy-Halkalı- A ga-edezi 15 ọdụ ụgbọ elu 17 kilomita-ogologo. A ga-ekwuputakwa 7 ike ụlọ ọrụ na njikwa 6 nke ụlọ ọrụ ahụ mgbe ọ tụlechara ihe ndị dị nro. TC Istanbul Obodo ukwu, Rail [More ...]